Ma xog muhiim ah ayaa laga jabsaday ololaha doorashada Trump? | Somalia News
Bogga rasmiga ah ee madaxweyanaha Mareykanka, Donald Trump, ku leeyahay internet-ka ayaa la jabsaday, waxaana lagu soo daabacay farriin u muuqatay mid aflagaaddo ku ah Mr Trump.
Kooxda u qaabilsan ololaha lagu doonayo dib usoo doorashadiisa ayaa sheegay inay hadda baarayaan sababta keentay in lala wareego website-ka muhiimka ah.
“Adduunku wuu ka daalay wararka been-abuurka ah ee uu maalin kasta soo gudbiyo madaxweynaha Mareykanka”, ayaa lagu soo qoray website-ka oo in muddo ah gacanta ugu jiray kooxo burcadda internet-ka ah.
Wax yar kaddib ayaa qoraalkaas laga saaray meesha.
Mas’uuliyiinta maamuleysa ololaha Trump ayaa sheegay “inaysan jirin xog xasaasi ah oo halkaas lagala baxay, maadaama aan waxba lagu keydinin boggaas”.
Sawirro laga soo qaaday fadeexadda ku dhacday ololaha Trump ayaa lagu faafiyay baraha bulshada. Hay;adda Dambi Baarista Federaalka Mareykanka ee loo yaqaanno FBI-da iyo Waaxda Caddaaladda ayaa sheegay in farriinta lagu soo bandhigay boggaas ay tahay war been abuur ah, boggana ay la wareegeen qolyo burcad ah.
“Waxaa la joogaa waqtigii dunida loo fasixi lahaa inay runta ogaato,” ayaa lagu yiri farriinta ay daabaceen qolyaha la wareegay bogga Trump.
Waxay sidoo kale sheegeen inay caddeymo u hayaan in maamulka Trump “uu wax ka ogaa abuurista fayraska corona” uuna faragalin ku hayo doorashada madaxweynaha ee la filayo inay dhacdo 3-da bisha November.
Farriintaas ayaa markaas kaddib lagu sheegay in xogtaas si loo bixiyo ay doonayaan lacag looga baddasho.
Ma jiraan wax caddeymo ah oo taageeraya hadallada lagu sheegay farriintaas, maamulka madaxweyne Trump-na waxay beeniyeen in xog muhiim ah halkaas laga qaatay.
“Website-ka ololaha Trump waa la jabsaday, laamaha amniga ayaana kala shaqeyneynaa sidii baaritaan loogu sameyn lahaa arrintaas ku saabsan weerarka. Ma jirto xog muhiim ah oo laga jabsatay bogga sababtoo ah wax macluumaad ah laguma keydiyo website-kan,” ayuu yiri agaasimaha waaxda warbaahinta ee Trump, oo lagu magacaabo Tim Murtaugh, oo la hadlay telefishinka CNN.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54739255original article
Previous articlePaul Scholes Oo Qiimeeyay Fursadaha Man United Ee Ku Guulaysiga Champions League.
Next articleTurkiga oo War ka soo saaray weerarkii maanta ka dhacay dalka Faransiiska